Salesforce Marketing Cloud Preference စင်တာ - AMPScript နှင့် Cloud Page ဥပမာ Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 3, 2021 သောကြာနေ့, မတ်လ 5, 2021 Douglas Karr
ဖြစ်ရပ်မှန်အဖြစ်အပျက် ... လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ကျော်က ExactTarget (ယခု Salesforce Marketing Cloud) အတွက်ပေါင်းစည်းရေးအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်စဉ်ကကျွန်ုပ်၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုသည်အမှန်တကယ်စတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်သည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်ကုမ္ပဏီများအားပလက်ဖောင်းနှင့်နက်ရှိုင်းသောပေါင်းစည်းမှုများဖြစ်ပေါ်စေရန်ကူညီခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာအဖြစ်ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သောပလက်ဖောင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဗဟုသုတများစွာကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
အရင်က developer ပိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်ကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကကျွန်တော့်ကိုရှေ့ဆက်သွားစေခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်အဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်မည်သည့်အခါမှမဖြစ်ခဲ့ ပိုင်ဆိုင်သည့် ထုတ်ကုန်။ အရောင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ရောင်းဝယ်ရေးတွင်ပါဝင်သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကကျွန်ုပ်အားအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုမျှော်လင့်နေစဉ်…အဖြစ်မှန်မှာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည်မတူညီသောဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုကိုမကြာခဏအကောင်အထည်ဖော်ပြီးကျွန်ုပ်မထွက်ခွာမီရက်အနည်းငယ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးစီမံကိန်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားသူတို့၏အီးမေးလ်များတွင် script များထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် scripting platform တစ်ခုပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါဟာအခြားကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာတစ်ယောက်နဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးသုတေသနတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ JQuery ပုံစံချဉ်းကပ်မှုကိုတီထွင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် arrays ကိုဖြတ်ပြီးစားသုံးနိုင်ခြင်း၊ JSON ကိုသုံးခြင်းစသည်တို့ပါဝင်သည်။ ဖြေရှင်းချက် ... ဒါကြောင့်ဖှံ့ဖွိုးတိုးထိမှန်သည်အထိ။ ထုတ်ကုန်သံသရာအစောပိုင်းတွင်၊ ကျွန်ုပ်၏စာကြည့်တိုက်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးအကြီးတန်းဆော့ဖ်ဝဲရေးသူတစ် ဦး ကအစားထိုးခဲ့သည် AMPscript.
နှစ်ကြာပြီးနောက် Salesforce ပါတနာ ငါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သောကုမ္ပဏီသည်ယခုအခါရှုပ်ထွေးပြီးစီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှုများကိုလုပ်ဆောင်နေပြီးကျွန်ုပ်သည်နေ့စဉ်အခြေခံအားဖြင့် AMPscript တွင်အီးမေးလ်အကြောင်းအရာယုတ္တိဗေဒကိုမြှင့်တင်ခြင်း၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ AMPscript နှင့်အလုပ်လုပ်သောတစ်နေ့နှင့်တစ်နေ့စိတ်ပျက်ခြင်းကထိုကာလများ၌မှားယွင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ချမိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်အားသေချာစေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖြေရှင်းချက်သည် ပို၍ ပြေပြစ်သွားလိမ့်မည်။ ငါ BASIC မှာ TRS-80 ပရိုဂရမ်းမင်းပြန်လုပ်နေသလိုခံစားရတယ်
သင် Cloud Pages အတွက်အသုံးပြုသောတည်းဖြတ်သူသည်ခွင့်မလွှတ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ကုဒ်နှင့်အတူ variable များကြေငြာခြင်းသို့မဟုတ် syntax အမှားများကဲ့သို့ရိုးရှင်းသောပြcatchနာများကိုမဖမ်းနိုင်ပါ။ စင်စစ်အားဖြင့်၊ သင်သည် server တစ်ခု၏အမှား ၅၀၀ ကိုသာဖြစ်ပေါ်စေမည့်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုအမှန်တကယ်ထုတ်ဝေနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့စာမျက်နှာများအတွက်နာမည်နှစ်ခုရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲလို့ငါ့ကိုမမေးပါနဲ့။
Pro ကို-အစွန်အဖျား: Cloud Pages များသည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတော့မည့်အချိန်တွင်နမူနာဒေတာကိုဘယ်တော့မှပြန်ပို့မည်မဟုတ်ပါက၎င်းသည်အစဉ်အမြဲလုပ်ဆောင်နေပုံရသည်။ သင်အမှားတစ်ခုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမယ်ဆိုရင် Cloud Page ကိုလုံး ၀ ဖျက်ပစ်ပြီးစလုပ်ရမယ်။ ငါထင်တာကတော့သူတည်ဆောက်ထားတဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံကကုဒ်ပြောင်းလဲမှုကိုခွဲခြားသိမြင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိဘူး။
ထို့အပြင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်ကုဒ်နမူနာများ၌သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် syntax အမှားများရှိသည်ကိုသင်သိရ။ ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။ ဟေး! ဒါဟာတကယ့်ကိုဆိုးဝါးတဲ့အတွေ့အကြုံပါ။ ဒါပေမယ့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောကြောင့်သင်ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးအသုံးပြုသင့်သည်။
ဘေးထွက်မှတ်စု: Cloud Page အသစ်တစ်ခုရှိနေပြီ အတှေ့အကွုံ…သူတို့ဟာစာမျက်နှာကိုပြန်လည်အရေပြားနဲ့ဖုံးအုပ်ထားသည့်အပြင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်လည်းမရရှိနိုင်ပါ။ ငါဟာအဆင့်မြင့်ထုတ်ဝေမှုအစီအစဉ်အတွက်ဗားရှင်းဟောင်းကိုပိုနှစ်သက်တယ်။
ငါ့ကုမ္ပဏီနေစဉ် Highbridge ရှုပ်ထွေးသော Ajax-enabled ဖြေရှင်းနည်းများကိုစနစ်များစွာပေါင်းစပ်။ AMPscript, SSJS, Cloud Pages နှင့်အီးမေးလ်တို့ဖြင့်အချက်အလက်တိုးချဲ့မှုများထည့်သွင်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရိုးရှင်းသောဥပမာတစ်ခုကိုမျှဝေလိုပါသည်။ သင်၏ Salesforce ဥပမာအားမေးမြန်းရန်နှင့်ဆွဲယူရန်အတွက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဥပမာကိုမျှဝေလိုသည်။ ဒေတာပြန် ဤကိစ္စတွင်, မာစတာ unsubscribe အလံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသောရိုးရှင်းသော boolean လယ်ပြင်။ သင်အသုံးပြုနိုင်သည့် preference page တစ်ခုသို့မဟုတ် profile center တစ်ခုလုံးကိုတည်ဆောက်ရန်ဒီ code ကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်။
Subscriber Data နှင့် Cloud-Page Link တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ပါ
သင်၏ Cloud Page အသေးစိတ်ကိုသင်ကြည့်ပါကသင်၏အီးမေးလ်များတွင်သင်ထည့်နိုင်သောစာမျက်နှာအတွက်ထူးခြားသောစာမျက်နှာ ID ရရှိနိုင်သည်။
syntax သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
Data Extensions များမှတစ်ဆင့် Cloud Pages မှတဆင့် Salesforce ဒေတာအတွက် AMPscript
ပထမအဆင့်သည်သင်၏ AMPscript ကို variable များကြေငြာရန်နှင့် Salesforce ထံမှအချက်အလက်များကိုသင်၏စာမျက်နှာတွင်ပြန်လည်ရယူရန်ဖြစ်သည်။ ဤဥပမာတွင်၊ ကျွန်ုပ်၏ Salesforce boolean field သည်အမှန် (သို့) မှားသောနေရာဖြစ်သည် OptedOut:
ယခုသင်သည်သင်၏ HTML နှင့်တည်ဆောက်မှုပုံစံကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။
ဒါတွေအကုန်လုံးကိုအတူတကွစုစည်းထားပါ။ သင်၏စာရင်းပေးသွင်းထားသူနှင့်အတူအသစ်ထပ်မံပြီး Salesforce တွင် boolean field (true / false) ကို update လုပ်ရန်တောင်းဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်သော preference page တစ်ခုရရှိထားပါပြီ။ ယခုသင်ရွေးချယ်လိုက်သောအဆက်အသွယ်များကိုမည်သည့်အီးမေးလ်မပို့သည်ကိုသေချာစေရန်ထိုနယ်ပယ်တဝိုက်တွင်စိတ်ကြိုက်မေးမြန်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။
သင်၏ Preference Page သို့မဟုတ် Profil Center ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်နည်း
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါက preference page တစ်ခုနဲ့ဖြစ်နိုင်သမျှရဲ့လှောင်ပြောင်မှုတစ်ခုပဲ။ သင်စဉ်းစားလိုသောတိုးတက်မှုများ -
သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့သည်ကုဒ်ကိုမထိဘဲသူတို့လိုချင်သည့်အချိန်တိုင်းစာမျက်နှာ၏ content ကို update လုပ်ရန်အခြားဒေတာ extension မှအမှန်တကယ်စာသားကိုဖြည့်ပါ။
အပိုဆောင်းပရိုဖိုင်းကိုသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးစေခြင်းငှါ, Salesforce စံချိန်ကနေအခြားပရိုဖိုင်းကိုသတင်းအချက်အလက်ဖြည့်ပါ။
စာမျက်နှာကိုသင်ချောမွေ့စွာဖြည့်စွက်နိုင်ရန် Ajax ဖြင့်စာမျက်နှာကိုစီမံပါ။
သင်၏အသုံးပြုသူသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသူတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပရိုဖိုင်းစင်တာကို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းပါ။
အကယ်၍ သင်သည် AMPscript ကိုလေ့လာရန်နှင့်ဖြန့်ဝေရန်အတွက်ထပ်ဆောင်းအကူအညီများကိုရယူလိုလျှင်ကြီးမားသောအရင်းအမြစ်များကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
AMPscript Guideအချို့သော Salesforce ၀ န်ထမ်းများကစီစဉ်ထားသည်။ ၎င်းသည် AMPscript syntax ၏ပြည့်စုံသောဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ပိုမိုအားကောင်းပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်တန်သင့်သည်။
Trailhead AMPscript - Salesforce ၏ Trailhead သည်အခမဲ့သင်ကြားရေးရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး AMPscript, SSJS နှင့်၎င်းနှစ်ခုစလုံးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်ပုံတို့ဖြင့်ဘာသာစကား၏အခြေခံကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်။
Salesforce များအတွက်လဲလှယ် Stack - AMPscript ကုဒ်နမူနာအမြောက်အများဖြင့်အကူအညီတောင်းရန်အွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်း။
သင်၏ Cloud Pages နှင့် Salesforce နှင့်သာလွန်ကောင်းမွန်သောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံများကိုပေါင်းစပ်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ အကယ်၍ သင်၏ကုမ္ပဏီကရုန်းကန်နေပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့အားကျွန်ုပ်တို့အားကူညီရန်အမြဲဆက်သွယ်ပါ။
Tags: လက်ခုပ်သံများCloud စာမျက်နှာများiifရောင်း ၀ ယ်မှုများအားပြန်လည်ရယူပါUpdateSingleSalesforceObject
အီးမေးလ်များအတွက်အမှောင်စနစ်: အဲဒါဘာလဲ။ မည်သည့်ဖောက်သည်များက၎င်းကိုထောက်ပံ့ပေးသနည်း။ ဘာ Code လိုအပ်ပါသလဲ?